Jamaac Maxamed Qaalib iyo Waayihii siyaasadeed ee Soomaalida – Radio Daljir
Abriil 22, 2017 4:00 b 0
Waraysigu wuxuu ka kooban yahay shan qeybood. Qeytba kowaad ee waraysiga wuxuu Jaamac Yare kaga sheekeeyay dhalashadiisii iyo barbaarintiisii. Muu garanayo markuu dhashay hase ahaatee markuu gu’-tirsaday waxay dhalashadiisu ku beegantay sanadkii 1933kii. Geeridii hooyadiis kaddib Jaamac Yare wuxuu go’aansaday inuu miyiga ka tago. Ugu dambayntii wuxuu yimid magaalada Hargeysa oo ka bilaabay shaqadii ugu horreysay markuu Biritishku ka talinayay gobollada waqooyi. Waraysiga qeybahiisa kale waxay ku saabsan yihiin halgankii gobanimadoonka iyo israacii Koonfurta iyo Waqooyiga.
Reer koonfureedku may isku haystaan sida loo dhaliyay gobanimada waayo ururkii Somali Youth League (SYL) baa horseed ka ahaa dhaqdhaqaaqii gobanimadoonka. ururradii kale oo Talyaaniga ku dhowaa siyaasad ahaan waxay talada u daba fadhiisteen SYL markay Soomaaliya jamhuuriyad noqotay waayo SYL wuxuu ahaa urur ku tiirsan taageerada beelaha Soomaaliyeed oo dhan halka ururrada kale ahaayeen ururro beeleed aan marnaba helin kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo gobanimada u oommanaa. Waqooyiga may ka jirn ururro taageersanaa Biritishka. Sida Jaamac Yare sheegay shaqaalaha Soomaalida looma oggolayn inay siyaasadda galaan. Ururkii ugu da’da weynaa Waqooyiga, Somali National League (SNL), waxaa loollan kula jiray United Somali Party (USP) iyo National United Front ( NUF, oo Nafta loo yiqiin ). Seddexdan urur midna Koonfurta kuma lahayn xafiis; SYL xafiisyo ayay ku lahayd Waqooyiga waayo wuxuu xisbigu u taagnaa midnimada siyaasadeed ee Soomaalida ka hor gobanimadii.
Seddexdii xisbi oo saldhiggoodu ahaa dhulkii Biritishku maamuli jiray waxay lahaayeen wargeyso af Carabi ku soo bixi jiray oo faafiin jiray siyaasadahooda. SNL, USP iyo NUF waxay wadaageen ujeeddo gobanimadoon waxayse u tartameen sida xisbiyo ka jira dal gobanimo qaatay. Jaamac Yare wuxuu sheegay in dadku ku qasbay siyaasiyiinta inay midnimada taageeraan gorgortan la’aan. Fikrad tan la mid ah waxaa dhowr iyo labaatan sano ka hor dhiibtay Cumar Carte Qaalib. Muu ka jirin Koonfurta urur SYL kula tartamay ujeeddada gobanimadoonka iyo la dagaallanka qabyaaladda. Waa sababta ururkii SYL u noqday ururka dalka ka talinayay ka hor afgambigii 1969kii.
Sanadkii 1946kii odayo dhaqameed ayaa soo saaray baaq ay ku diiddan yihiin isku darista Soomaalida (amalgamation). Maxamed Ciise Turunji oo xiganayay qoraallo yaalla xarunta keydka qoraallada Biritishka ayaa qoray in 43 oday dhaqameed ay saxiixeen baaqa (eeg bogga 39 buugga Somalia: The Untold History 1941-1969). I. M. Lewis wuxuu xusay magaca ururka odayaashu adeegsadeen (Isxaaqiya) hase ahaatee Jaamac Yare wuu xusay magaca beesha raggii baaqa saxiixay ka soo jeedeen iyo in odayaal kale oo reer waqooyi ahaa oo ka soo hor jeesteen baaqa.
Ururkii SYL wuxuu hoggaamiyay ismaamulkii ugu horreeyay oo Koonfurta ka hirgalay kahor gobanimada. Siyaasiyiintii Koonfurta waa loo tababaray maamulka dalka; doorashooyiin heer dowlado hoose ayay abaabuleeen kahor gobanimadii. Markii Qaramada Midoobay ay ka baaraan-degaysay dalka loo xilsaari doono inuu Soomaaliyadii Talyaanigu maamuli jiray ka hor 1941kii u diyaariyo madax-bannaani, SYL iyo urruradii kale , oo loo yiqiin Borotalyanka ( Pro-Italians), waxay soo gudbiyeen doodo ku saabsan sida in laga yeelo ay tahay Koonfurta oo markaas loo yiqiin Dhulalkii Cadowga ( Enemy Territories) oo uu Maamulkii Militariga Biritishku maamulayay. Siyaasiyiinta reer Waqooyiga may helin fursad loogu diyaariyay gobanimada.
Jaamac Yare wuxuu taabtay laba arrimood oo ina tusaya sida dowladdii rayidka ahayd ee maamulkii Madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan wax uga qabatay kalsooni-darradii ka dhalatay kacdoonkii (waa ereyga Borefesor Axmed Ismaaciil Samatar adeegsaday – eeg buugga Socialist Somalia bogga 62; I M. Lewis wuxuu ku tilmaamay “afgembi militari oo dhicisoobay” eeg isla buuggiisa kor ku xusan bogga 173). Sida Jaamac Yare xusay dowladdu may doonayn inay ciqaabto dhallinyaradii ka dambaysay kacdoonka. Shaqadii uu dowladda u hayay baa u fududaysay isaga inuu ogaado waxa dowladdu kaga talagashay raggii u xirnaa falkaas, umase sheegin Jeneraal Daa’uud, taliyihii Xoogga Dalka, waayo Jaamac Yare, sida dowladdii markaas jirtay, muu doonayn in ragga dacwadu ku socotay lagu qaado dambi keeni kara in la toogto ama inay xabsi dheer lagu xukumo.
Toddobaatan sano ka hor reer Waqooyigu ma lahayn dhaqdhaqaaqyo u dhigmay kuwii Koonfurta ka jiray oo, ha kala aragti-duwaanaadeen, ku loollamayay aayaha siyaasadeed ee Koonfurta. Sababo sharciyeed iyo kuwo taariikheed baa Somaliland ka hortaagan aqoonsi. Waddada loo marayo aqoonsiga waa inaysan noqon mid keenta in qodobka soohdimaha gumeystuhu ka tagay loo cuskado dal aan dal kale soohdintiisa ku xadgudbin. Waa sababta xubnaha Midowga Afrika uga cagajiidayaan inay Somaliland u aqoonsadaan dal madaxbannaan.
FG: Maqaalka kore wuxuu ka turjumayaa aragtida qoraha, loomana fasiran karo tan Radio Daljir
Warbaahinta Daljir waa soodhawaynaysaa qoraalada ku qoran afka Soomaaliga. Fadlan hubi in qoraalkaagu xaqiiqo ku salaysanyahay, fikirkaaguna asluubaysanyahay. Intaas markii aad xaqiijisid qoraalka nala qaybso oo noogu soo hagaaji emailka: [email protected]
Qormooyinka Daljir 52 Wararka 19872
Gaalkacyo: Fursad Shaqo UNHCR – Sarkaal Maamulka (Administrative/Programme Officer)